ရွှေရောင်မှတ်တမ်း: November 2009
တစ် နှစ် - ခင်ပြီး စလစ်
သုံး လေး - မမုန်းကြေးနော်
ငါး ခြောက် - စိတ်မကောက်နဲ့
ခုနစ် ရှစ် - မဂျစ်နဲ့နော်
ကိုး တစ်ဆယ် - မုန်းလိုက်မယ်..
Posted by နှင်းပွင့်လေး at 11/16/20090comments Links to this post
တွေ့ဆုံမှု ကားကို စီး..
သူကြောင့် - ပျော်ရွှင်၊ ကြည်နှုးရတယ်
သူကြောင့်လဲ - စိတ်ညစ်ရတယ်
သူကြောင့် - ရန်သူတွေဖြစ်ရတယ်
သူကြောင့်ပဲ - နာကြည်းရတယ်
သူကြောင့်လဲ - သေဆုံးရတယ်
သူကြောင့် - ၀မ်းနည်းကြေကွဲနေရတယ်
ဒါပေမယ့် လူတွေ အားလုံးက သူမရှိရင် မဖြစ်ဘူးတဲ့........
ဒါတွေ အားလုံးဟာ သူကြောင့်ပေါ့
သိပ်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားကို ဒီထက်လေးနက်အောင် မပြောတတ်တော့ဘူးလား............ ပြောတတ်ရင် ပြောပါလား...... ကြားချင်လို့ပါ။
လူသားတိုင်း နှုတ်ဖျားမှ ထွက်ကျလာတဲ့ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားက မလေးနက်တော့ဘူးနော်...... ချစ်သူရော ဘယ်လိုထင်လဲ။ လူသားတိုင်း အချစ်နဲ့ ပတ်သက်လာရင် ရှောင်ကွင်းလို့မရဘူးတဲ့။ မှန်တယ်နော်...........။
ဒါပေမယ့်........ ချစ်တဲ့ သူရယ်.......
အမှားနဲ့ အမှန်ကိုတော့ ခွဲခြားတတ်ရမယ်။ မှားတာကို သိရက်နဲ့ မပြင်ရင်တော့ ဘယ်တော့မှ အမှန်ကို ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ အမှန်ကိုလည်း အမှန်မဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းတတ်ရမယ်။ ဒါမှ ချစ်သူလည်း စိတ်ချမ်းသာမယ်နော်။
Posted by နှင်းပွင့်လေး at 11/15/20090comments Links to this post
Labels: ချစ်သူအတွက် ရေးတဲ့စာ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားကို လူတိုင်းပြောနေကြတယ်နော်။ သီးချင်းတောင် ရှိသေးတယ် (အဖိုးကလဲ အဖွားကို ချစ်တယ် ချစ်တယ်တဲ့။ အဖေကလဲ အမေ့ကို ချစ်တယ်တဲ့။ သူကလဲ ကိုယ့်ကို ချစ်တယ်ပြောပါတယ်။ ) ကဲ မိုက်တယ်နော်။ သူတို့တွေက တကယ်ကော ချစ်ရဲ့လား ...........
ကဲ........ ချစ်သူရော .... ဘယ်လိုထင်လဲ
တကယ့်အချစ်စစ် အချစ်မှန်ဆိုတာ ရှိတော့ရှိပါတယ်။ ချစ်သူရယ် .......... ဒါပေမယ့် ရှားတယ်နော်။
ချစ်သူလည်း အချစ်စစ်နဲ့ ချစ်ခဲ့ရဲ့လား............
လောကမှာ ပန်းတိုင်းမမွှေး၊ မွှေးတိုင်းပန်းမဟုတ်တဲ့။ ဟုတ်တယ် ချစ်သူရေ။ နှာခေါင်းနဲ့ အသက်ရှူတိုင်း လူမဟုတ်ဘူး။ ခြေနှစ်ချောင်းနဲ့ လက်နှစ်ဖက်ပါတိုင်းလဲ လူမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။
ပန်းဆိုတာ လှပပြီး မွှေးမှသာ ပန်းပွင့်စစ်စစ် ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ခူးတဲ့သူ၊ ပန်လိုတဲ့ သူ၊ ဘုရားကပ်လိုတဲ့ သူ၊ ၀ယ်လိုတဲ့ သူတွေပေါမှ မမှန်ပါပဲတဲ့။ အဲသလိုပါပဲ ချစ်သူရယ်.............
လောကမှာ လူတွေအများကြီးရှိပေမယ့်လည်း ပညာတတ်မပါ၊ ပညာမဲ့သူ၊ ချမ်းသာသူ၊ ဆင်းရဲသူ၊ ပြီးတော့ သြဇာအာဏာရှိသူ၊ သြဇာအာဏာကင်းမဲ့သူ၊ ဘုရင်။ မှူးမတ် မှ သူတောင်းစား....... စတဲ့ အမျိုးမျိုး ကွာဟမှုတွေ ရှိနေကြတယ်တဲ့.......။
ဘယ်သူတွေ ဘာပဲ ဖြစ်နေဖြစ်နေတော့.......
လူတစ်ယောက်ရဲ့ နောက်မှာ အခြားလူတွေ တော်တော်များများရှိနေပါသတဲ့......
သူ့ မိတ် သူ့အပေါင်းအသင်းအလိုက် အင်အားရှိတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ ချစ်သူရေ.......
လောကမှာ အချစ်နဲ့ အမုန်း၊ အပြုံးနဲ့ အမဲ့၊ အထက်နဲ့အောက်၊ အရှေ့နဲ့အနောက်၊ တောင်နဲ့ မြောက်၊ ဖိုနဲ့ မတို့ရဲ့ ကြားမှာဖြစ်ပေါ် ပေါက်ဖွားလာတဲ့ အမှားအယွင်းကြောင့်ပဲ လူတွေဟာ အမှားကို အမှန်ဖြစ်အောင် ပြုပြင်ပြီး ကိုယ့်ဘ၀ကို ထိန်းကျောင်းခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့ကြတယ်။
လောကမှာ .......... မမှားတဲ့ ရှေ့နေ။ မသေတဲ့ ဆေးသမား၊ သားသမီးကို မချစ်တဲ့ မိဘ၊ ဖြောင့်ဖြူးတဲ့လမ်းရယ်လို့မှ မရှိတာ.......... ဟုတ်တယ်နော်။
အဲဒီတော့ .. စိတ်နဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ လူသားတွေဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမှန်နဲ့  အမှားရဲ့ ကြားမှာ ရပ်နေကြတဲ့ လူချည်းပဲ............
ဒီတော့ ........... ချစ်သူရယ်
အားလုံး အားလုံးမလိုလားတဲ့ သူတစ်ယောက်ရှိတယ်။ အဲဒီလူကတော့ ရန်သူပါပဲတဲ့။ ဟုတ်တယ် ချစ်သူရေ......... ရန်သူကင်းတဲ့ လူရယ်လို့ လောကမှာ မရှိပါဘူးတဲ့။ ဟုတ်တယ်မလား ......... ချစ်သူ။
လူသားတိုင်း အရွယ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုကြ၊ သားသမီးယူကြ၊ ဘ၀ကို ထူထောင်ကြ၊ အောင်မြင် မှုတွေ၊ ရယူလိုတဲ့ လူသားတွေချည်းပါပဲနော်။
အဲသလို အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်။ သားသမီးတွေ ယူတော့မယ်ဆိုရင် လူသားတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး ပေါင်းသင်းကြရတော့မယ်။ အဲသလို ထိတွေ့ပေါင်းသင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေထဲမှာ အမျိုးမျိုးသော လူတွေ စိတ်အမျိုးမျိုးအထွေထွေနဲ့ လူသားတွေ ပါဝင်နေမှာ အမှန်ပဲ။
ဖြူတာကို မည်းချင်းမည်းမယ်။ မည်းတာကို ဖြူချင်းဖြူမယ်။ မနာလိုတဲ့ လူရှိမယ်။ တကယ့်တကယ် ၀မ်းသာတဲ့ လူရှိမယ်။ ရေလိုက် ငါးလိုက်နဲ့ နေတဲ့သူရှိမယ်။ အချဉ်ကြိုက်အချဉ်ကျွေးချင် ကျွေးကြမယ်။ အချိုကြိုက် အချိုပေးချင်ပေးကြမယ်.........
အိမ်ထောင်မကျခင်က ဖွင့်ထားတဲ့ မျက်လုံးအစုံကိုတော့ အိမ်ထောင်ကျပြီးတာနဲ့ တစ်ဖက်ပိတ်ပစ် ထားပါတဲ့
မရေရာတဲ့ အရာကို ရေရာသလိုလိုမျိုး.....
မသိတဲ့ အရာကို သိသလိုလိုမျိုး........
အဲသလို..... လိုလိုပဲဆိုတဲ့ လူသားတွေ လောကမှာ အများကြီးပါပဲ ချစ်တဲ့သူ။ အဲဒီ လိုလိုဆိုတဲ့ လူသားတွေရဲ့ ခန္ဒာကိုယ်ထဲမှာ ဟန်ဆောင်မှုတွေ အများကြီးရှိနေတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီလို လူစားမျိုးတွေ မေ့နေတာက အဲဒီလူအတွက် အန္တရာယ်တွေ အများကြီးရှိနေတယ်။ နောက်ကျောကို ဓားနဲ့ အထိုးခံ၇တော့မယ်ဆိုတာကိုတော့ ...........အဲဒီလူ မသိဘူး။
မသိတာကို မသိသေးဘူး....... မသိဘူးလို့ ရဲရဲတင်းတင်းဝန်ခံလိုက်စမ်းပါ။ အဲဒီလူ..... သိလာပါလိမ့်မယ်။ သအောင်လည်း သိတဲ့လူက လမ်းညွှန်ပြပေးပါလိမ့်မယ်........
မညာပါနဲ့ .............လိုလို မလုပ်ပါနဲ့..............
ချစ်တဲ့သူလဲ အဲလို မလုပ်နဲ့နော်..........
လောကမှာ လူတွေကို မခင်မင်လို့မရဘူး။ မိတ်ဆွေအဖြစ် မပေါင်းသင်းလို့မရဘူး။ ခင်ခင် မင်မင်နဲ့ ခေါ်ရ ပြောရ၊ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အကူအညီယူကြရတယ်လေ။ ချစ်သူကတော့ စစ်မှန်တဲ့ မိတ်ဆွေကိုရှာပြီး ပေါင်းသင်းချင်မှာ ပဲလေ.........
ဒါပေမယ့် ......... ချစ်သူရယ်
အတုတွေ အများကြီးပါ။ ပြုံးသလိုလိုနဲ့ ရင်ထဲက ငိုနေတာတွေ၊ အလိုလိုက်သလိုလိုနဲ့ ရင်ထဲ ခံပြင်းနေ တာတွေ၊ ကြည့်ဖြူသလိုလိုနဲ့ ရင်ထဲ ဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူတွေ........
အဲဒီလူတွေရှိတယ်။ ပြောရရင်....... မိတ်ဆွေ အတုတွေပေါ့။ အဲသလို မိတ်ဆွေတွေကို ဝေးဝေးက ရှောင်ပါ။ ချစ်သူက ဝေးဝေးရှောင်လေ အဲဒီလူရဲ့ ရင်ထဲ ခံစားရလေပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကို ဓားနဲ့ထိုးသတ်မယ့်လူကို ချစ်သူကျောပိုးထားရင်တော့ ချစ်သူတရားခံပဲပေါ့...............
အပြောချိုချိုနဲ့............. အပြုံးမြမြပြုံးပြီး ...........လိုလားဟန်ပြနေတဲ့ လူရဲ့ မျက်လုံးတွေက စကားပြောတတ်ကြတယ်။
ရင်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မနာလိုစိတ်က မျက်လုံးတွေကို ထင်ဟက်နေစမြဲပဲ မဟုတ်လား..........
လူတွေမှာ မာန်တွေ၊ မာနတွေ၊ အတ္တတွေ၊ အ၀ိဇ္ဖာတွေ၊ ငါမှငါသိ၊ ငါမှငါတတ်၊ ငါမှ သူများထက်သာဆိုတဲ့ လူတွေရှိတတ်တယ်။ အဲဒီလို လူမျိုးတွေက ချစ်သူကို လာပြီး ပြိုင်မယ်ဆိုရင်၊ ချစ်သူလုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကို ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေပစ်လိုက်ပါ။ အဲချစ်သူက သန့်သန့်နဲ့ ချစ်သူလုပ်နေတာတွေ ခရေစေ့တွင်းကျသွားပြီး ပြောလိုက်ရင်တော့
ချစ်သူကိ ပြိုင်တဲ့လူရဲ့ ပါးစပ်က ထွက်လာမယ့်စကားတွေက ပန်းပွင့်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူး။ လေပြေ လေညှင်းတွေ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အေးမြတဲ့ နှင်းစက်တွေ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကြည်နှုးစရာ အရယ်အပြုံးတွေစကားတွေ မဖြစ်နိုင်ဘူး
အဲဒီလူရဲ့ နှုတ်က ထွက်လာမယ့် စကားတွေဟာ မာရ်နတ်စစ်သည်တွေရဲ့ အသံထက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ စကား၊ သေမင်းရဲ့ ရယ်သံလို ကြောက်စရာစကားတွေပဲ ထွက်လာလိမ့်မယ်....
အဲဒီလူဟာ ချစ်သူကို အမြဲတန်းပြိုင်ပြီး ချစ်သူကို အမြဲတန်းရန်ပြုနေလို့ပါပဲ။
ချစ်သူအပေါ်ထားတဲ့ မနာလိုစိတ်တွေဟာ၊ လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလို ထင်ရှားစွာ ပြပါလိမ့်မယ်။ ချစ်သူရေ
လောကမှာ လူအချင်းချင်းနားလည်ခွင့်လွှတ်မှုတွေနဲ့ အမြင်အချင်းချင်း အတွေးအချင်းချင်း ဖလှယ်ကြရမယ်။ စာဖတ်တဲ့လူ ပြီးတော့ အဲဒီစာဖတ်တဲ့လူ ကိုယ်တိုင်က အသိအမြင် အတွေးတွေကို ဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ လူဆိုရင်း အဲံဒီလူဟာ စာမဖတ်တဲ့ လူထက် အမြင်အသိပိုမယ်။
တစ်ဖက်လူက အသိအမြင်အနည်းငယ်ပဲရှိမယ်ဆိုရင်တော့ စာဖတ်တဲ့လူကို ဆရာတင်ပြီး အမြင်ချင်း ဖလှယ်ကြရလိမ့်မယ်။
ဒါဆိုရင် ..... စာမဖတ်တဲ့ လူရဲ့ အသိထဲမှာ ရင့်ကျက်တဲ့ အသိအမြင်တွေကို စာဖတ်တဲ့ လူဆီက ရရှိသွားလိမ့်မယ်.........
ချစ်သူရေ..... အသိအမြင်ကျယ်အောင်........ အမြင်အသိကြွယ်အောင်........ စာတွေ များများဖတ်ပါနော်.........။
လောကမှာ အရာရာကို ပေးဆပ်ရဲတဲ့ လူဆိုတာ၊ အဲဒီလူရဲ့ အစွမ်းသတ္တိအတိမ်အနက်အပေါ်မူတည်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အောင်မြင်မှုတစ်ခုပါပဲ၊ အဲဒီလိုပါပဲ........ လူသားတွေရဲ့ အနီးမှာရှိတဲ့ လူသားတိုင်းအရာရာကို ပေးဆပ်ရဲတဲ့သူတွေ ရှိနေကြတယ်။
သူတို့က မိဘနှစ်ပါးဖြစ်ပြီး၊ သားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင် ပင်လယ်ရေကို ခမ်းခြောက်အောင်ပြုပေးပါဆိုရင် ပြုပေးကြမှာဖြစ်ပြီး သူတို့အတွက် သားသမီးတွေက ရေတစ်ခွက်တိုက်ပါဆိုရင် လက်နှေးနေကြမှာ အမှန်ပါပဲ.....
အဖေနဲ့ အမေဆိုတာ ကမ္ဘာကြီးကို ကျားကန်ပေးထားတဲ့ မာကျောတဲ့ ကျောက်တိုင်တွေပဲဖြစ်တယ်။ အများကြီးရှိတာတယ်။
အဖေနဲ့ အမေ ခင်ဗျား ... ကျန်းခံ့သာလို့ မာပါစ။
ဒီမှာတော့ ကျောင်းရောက်တဲ့ ပထမတစ်လလုံးလုံး ဘာစာမှ မသင်ရပါဘူး။
စာသင်ခန်းတွေဆီမှ မသွားဖြစ်လို့၊၊ သွားဖြစ်တဲ့ တစ်ရက်ကလည်း ညဘက်
ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီညက မီးမလာဘူး။ ပြီးတော့ ဆရာလည်း မလာဘူး။
စာသင်တဲ့ တစ်နေ့မှာကျတော့ ဆရာက အတန်းထဲမှာ ပြောတယ်၊ `ဒီအခန်းထဲမှာ
နလပိန်းတုံးရှိရင် မတ်တတ်ရပ်စမ်းဟေ့´တဲ့။ သားတို့ တစ်တန်းလုံးငြိမ်ပြီး
ဘယ်သူမှ မလှုပ်ကြဘူး။ ဒါနဲ့ ခဏနေတော့ သား မတ်တတ်ရပ်လိုက်တယ်။ အခန်းထဲမှာ
ဆရာတစ်ယောက်တည်း ရပ်နေတာကို အားနာလို့။
ကောလိပ်ကျောင်းသားဆိုပြီး ဘောင်းဘီနဲ့ ရှူးဖိနပ်နဲ့ ကျောင်းတက်လို့
မရပါဘူးဗျာ။ သချာင်္တွက်ချိန်ကျလို့ ဆယ်ဂဏန်းကျော်သွားရင် ရှူးဖိနပ်ကို
ကောလိပ်ကျောင်းမှာ ကျောင်းသူလေးတွေ ချောတယ်။ အဖေတို့ အမေတို့အတွက်
ချွေးမလောင်းကိုရွေးပြီး ရည်းစားစာတစ်စောင် အင်္ဂလိပ်လိုရေးပြီး
ပေးလိုက်တယ်။ သားကို အင်္ဂလိပ်လို တက်လှပြီမထင်နဲ့။ သားမရေးတတ် ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကိစ္စမရှိဘူး။ ကောင်မလေးကလည်း အင်္ဂလိပ်လို မဖတ်တတ်ဘူး။
စာရေးတာ နားဦးမယ်။ သား သိပ်နေမကောင်းဘူး။ ဟိုတစ်ပတ်က ဆရာက `မင်းတို့
အပြင်စာတွေ များများ ဖတ်ရမယ်´ဆိုတာနဲ့ ညဘက်အပြင်ထွက်ပြီး စာဖတ်တာ
အအေးမိသွားတယ်။ နေမကောင်းဖြစ်လိုက်တာ ပိန်သွားလို့ ရွာကယူလာတဲ့
ဦးထုပ်တောင် မတော်တော့ဘူး။ အဲဒါ နောက်စေ့ကို တူနဲ့ ထုထားရတယ်။ ဒီတော့မှ
နောက်စေ့မှာ ဘုထွက်ပြီး ဦးထုပ်က ကျွတ်မကျတော့ဘူးပေါ့။
ပြီးတော့ မနက်ဖြန်မှာ သားတို့ကို Blood Test စစ်မယ်ဆိုလို့ ဒီည တစ်ညလုံး
အမေ အသက်ရှင်နေဆဲပဲ ရှိသေးတယ်ဆိုတာ သားသိရအောင် စာလှမ်းရေးလိုက်တာပါ။
မင်း စာမြန်မြန် မဖတ်နိုင်မှန်းသိလို့ အမေ ဒီစာကို ဖြည်းဖြည်းပဲ
မင်း အိမ်ပြန်လာရင် အိမ်ဘယ်မှာမှန်းသိမှာ မဟုတ်ဘူး။ အမေတို့ ပြောင်းသွားကြပြီ။
မင်းအဖေလား။ အခု အလုပ်ကောင်းကောင်း တစ်ခုရနေပြီ။ သူ့အောက်မှာ လူ ၅၀၀
လောက်ရှိတယ်။ သချိုင်းမှာ မြက်ရိပ်နေရတယ်လေ။
အခု အမေတို့အိမ်အသစ်မှာ အ၀တ်လျှော်စက်တစ်လုံးရှိတယ်။ သိပ်တော့
မကောင်းလှပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က အမေအဲဒီထဲ ရှပ်အကျီ ၁၄ထည် ထည့်တယ်။
ပြီး ခလုပ်နှိပ်လိုက်တာ အဲဒီအကျီတွေကို အဲဒီကတည်းက ပြန်မတွေ့ရတော့ပါဘူး။
သားအမ မမရီလည်း ဒီနေ့မနက်ပဲ ကလေးမွေးတယ်။ သားလေးလား၊ သမီးလေးလားတော့ အမေ
မသိသေးဘူး။ အဲဒီတော့ မင်းက အန်တီဖြစ်မလား၊ အန်ကယ်လ်ဖြစ်မလား အမေလည်း
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာ မင်းရဲ့ အန်ကယ်ချစ်လည်း တို့မြို့က
အရက်ချက်စက်ရုံမှာ ၀ီစကီကန်ထဲ ကျပြီးနစ်လို့ သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချို့က
ခုန်ဆင်းပြီးကယ်ကြသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူက ကယ်တဲ့သူအားလုံးကို သတ္တိရှိရှိ
တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့တယ်။ သူ့ကို သဂြိုဟ်တော့ အဲဒီမီးကို ငြိမ်းရတာ ၃
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က မိုး ၂ ခါရွာတယ်။ တစ်ခါက ၃ ရက်ကြာပြီး နောက်တစ်ခါက ၄
ရက်ကြာတယ်။ တနင်္လာနေ့တုန်းကများ လေတွေတိုက်လိုက်တာ ခြံထဲက ကြက်မတစ်ကောင်ဟာ
ကြက်ဥတစ်လုံးတည်းကို လေးခါ ဥရတယ်။
အသုဘအလောင်းပြင်ဆင်ပေးတဲ့ အိမ်က စာတစ်စောင်မနေ့က ရတယ်။ သူက
အမေတို့ပေးစရာရှိတဲ့ ကြွေးကျန်ကို ၇ ရက်အတွင်း မပေးရင် မင်းဘွားအေကြီးကို
P.S : အမေ သားအတွက် ငွေ၅ထောင်-ထည့်ပို့မလို့ပဲ။ ဒါပေမယ့် စာအိတ်က ပိတ်ပြီးသွားပြီ။
********** မေးထဲကပါ ********
Posted by နှင်းပွင့်လေး at 11/12/20090comments Links to this post
အိန္ဒိယနိုင်ငံက ရှေးလူကြီးတွေဟာ သူတို့ သားသမီးတွေ မွေးလာတာနဲ့ သူတို့သိကျွမ်းရင်နှီးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေထဲက
သားသမီးတွေနဲ့ အိမ်ထောင်ချပေးဖို့ သဘောတူတတ်ကြသတဲ့..။ ဒီတော့ သူတို့တွေဟာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူ
ညီမှု ရခဲ့ပြီဆိုရင် သူတို့သားသမီးတွေရဲ့ နဖူးပေါ်မှာ သူတို့ သဘောတူထားတဲ့ သူတို့ မိတ်ဆွေရဲ့ သားသမီး အမည်
ကို ဆေးမှင်နဲ့ ရေးထားလိုက်ကြသတဲ့...။
ဒီလိုနဲ့ ဒီကောင်လေး ကောင်မလေးတွေဟာ ကြီးလာတော့ သူတို့နဖူးမှာရေးထားတဲ့ သူနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုကြရသတဲ့..။
ဒါပေမဲ့ နောင်အခါ ခေတ်ကာလအရ နေရာဒေသတွေ ရွေ့ပြောင်းကြရတော့ နေရပ်ဒေသတွေဟာ တစ်နေရာထဲမှာ နေကြတာ
မဟုတ်တော့ နဖူးမှာ နာမည်ရေးထားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ကို တွေ့ကြရဖို့ ကောင်လေး ၊ ကောင်မလေးတွေဟာ နေရာအနှံ
ရှာဖွေ လက်ထပ်ကြရသတဲ့..။ ဒါကို နဖူးစာ ရွာလည်တယ်လို့ခေါ်တယ်လေ..။
နဖူးစာ ရွာလည်ပြီး နဖူးမှာ ကိုယ့်နာမည်ပါတဲ့ ချစ်သူကို တွေ့ကြရလို့ သူတို့ အိမ်ထောင်ပြုကြတဲ့ အခါမှာ ကိုယ့်နာမည်
ပါတဲ့ နဖူးလေးကို အမှတ်တရ နမ်းတတ်ကြသတဲ့..။ ငါ့ချစ်သူကို ငါရှာတွေ့ပြီ ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ လက်ထပ်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်နာမည်
ပါတဲ့ နဖူးလေးကို နမ်းတာဟာ ဒီနေ့ အထိ အမှတ်တရ ဖြစ်နေဆဲပါ...။
ဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်သားသမီးကို ဘယ်မိတ်ဆွေ သားသမီးနဲ့မှ လက်ထပ်ဖို့ သဘောတူညီမှု မရတဲ့သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့
သားသမီးတွေရဲ့ နဖူးမှာ ဘာနာမည်မှ ရေးမပေးနိုင်ကြဘူးတဲ့..။ ဒီလိုပဲ သူတို့တွေဟာ အပျိုကြီး ၊ လူပျိုကြီးတွေ ဖြစ်လာကြတယ်..။
တချို့ကျတော့ နဖူးမှာ နာမည်တွေ အများကြီးပါတတ်ကြတယ်..။ သူတို့တွေက အိမ်ထောင်ဆက်တွေ များကြပြန်ရော..။
ပန်းကလေး ဒီလိုပြောနေလို့ ငါ့နဖူးမှာ ဘာနာမည်ပါလဲ ဆိုပြီး အခုထပြီး မှန်ထဲမှာ ပြူးပြဲကြည့်ချင်နေပါသလား သူငယ်ချင်း..။
ပြီးတော့ နာမည်တစ်ခုကိုလည်း တွေ့အောင်ရှာကြည့်ပါဦး..။
ဒီနာမည်ဟာ သူငယ်ချင်း ချစ်သူပါပဲ..။
ပြီးရင် ကိုယ့်နာမည်ပါတဲ့ နဖူးလေးကို နမ်းဖို့ကိုလဲ မမေ့ပါနဲ့ဦး....။
ဒီလောက်ပြူးပြဲရှာနေတာတောင်မှ သူငယ်ချင်း နဖူးမှာ ဘာနာမည်မှ မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ ပန်းကလေး စိတ်မကောင်းပါဘူး...။
သူငယ်ချင်းဟာ အပျိုကြီး ၊ လူပျိုကြီး ဖြစ်တော့မယ်..။ ဒါတော့ ပန်းကလေးလည်း မတတ်နိုင်ဘူးနော် ... ဟိဟိ (မရည်ရွယ်ဘူးနော်)
သူများကိုသာ ပြောနေတာ သတိရလို့ ပန်းကလေးက ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် နဖူးကို မှန်ထဲ ပြန်ကြည့်လိုက်တော့... နာမည်လေးတစ်ခု
ပန်းကလေး နဖူးမှာ တွေ့ရတယ်ရှင့် ...။ ဘာလဲ ........ စိတ်ဝင်းစားသွားလား။ ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ........ ဟိဟိ အဲဒါနဲ့ သေချာဖတ်ကြည့်လိုက်တော့........
“ ----------------------” တဲ့...။
(မှတ်ချက်။ ။ ဟိန္ဒူကျမ်းမှ အချက်အလက်တချို့ကို ဆင့်ပွားရေးထားတာပါ..။)
အချစ်ဆိုတာ - အချစ်ပါပဲ
ဝေးနေလည် - အချစ်ပဲ
နီးနေလည်း - အချစ်ပဲ
ချစ်တယ်လို့ပြောလည်း - အချစ်ပဲ
သူရှိနေလည်း - အချစ်ပဲ
သူးထားသွားလည်း - အချစ်ပဲ
အချစ်ဆိုတာတော့ - အချစ်ပါပဲ
**** လူတိုင်း ချစ်နိုင်ပါစေ *****
ဘ၀င်မြင့်၊ မာန်မာနထောင်လွှားရင် လူမုန်းများတယ်။ နှိမ့်ချရင် လူမုန်းမရှိဘူး။ အထင်ကြီးမခံချင်လို့ နှိမ့်ချရင် လူတွေက ပိုအထင်ကြီးတယ်။ နှိမ့်ချတယ်ဆိုတာ ပညာကြီးမြင့်သူ၊ စိတ်သဘောထားကြီးမြတ်သူမှ လုပ်နိုင်တာ။ နှိမ့်ချခြင်းဖြင့် ကြီးမြင့်ပါစေ။ ဒါမေပဲ့ နှိမ့်ချတာနဲ့ နိမ့်ကျတာ မတူဘူး။
Posted by နှင်းပွင့်လေး at 11/02/20090comments Links to this post
သူရောကိုယ်ပါ အကျိုးရှိတဲ့ လုပ်ငန်းမျိုးလုပ်။ ကိုယ်အကျိုးရှိ သူအကျိုးယုတ် မလုပ်နဲ့။ လူမုန်းတယ်။ အဲဒါမျိုး များများလုပ်လို့ လူမုန်းများရင် ကိုယ်ကျိုးယုတ်ပြီး ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။
မဲ့ကာရွဲ့ကာပြောရင် အလှပျက်တယ်။ ဥပဓိရုပ်ပျက်တယ်။ ယောက်ျားမှာ မဲ့ကာရွဲ့ကာပြောသူနည်းပါတယ်။ မိန်းမသားတွေက ပိုများတယ်။ မဲ့ကာရွဲ့ကာပြောရင် ကြည့်မြင်ရတာ အရုပ်ဆိုးတယ်။ မှန်ထဲမှာ ကြည့်ပြီး ပြောကြည့်ပါ။ အလွန်လှတဲ့ မိန်းခလေးတောင် မဲ့ကာရွဲ့ကာပြောရင် အလှပျက်တယ်။ အကျည်းတန်သွားတယ်။ နှမျောစရာ၊ သနားစရာ ..... “မိဘ၊ အဒေါ်၊ အစ်မတို့ပြုပြင်မပေးကြလေခြင်း” လို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ မဲ့ကာရွဲ့ကာပြောခြင်းဟာ စိတ်ရင်းမကောင်းတာကို အခြေခံတယ်။ မဲ့ကာရွဲ့ကာပြောခြင်းကြောင့် အလှမပျက်စေနဲ့။ စိတ်ကောင်းရှိအောင် ပြုပြင်ပါ။
လူတွေဟာ ရုပ်ကို အလှပြင်သလို နှလုံးသားကိုလဲ အလှပြင်ဖို့လိုပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ ဆံပင်ကို အလှပြင်တယ်။ မျက်နှာကိုလဲ အလှပြင်တယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးကိုလဲ လှပအောင် ၀တ်ဆင်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ထားက မကောင်းဘူး။ ဒေါသမာနတွေနဲ့ ပူနေတယ်။ မနာလို ၀န်တိုစိတ်များတယ်။ ကောက်ကျစ်တယ်။ ရက်စက်ရိုင်းစိုင်းတယ်။ စိတ်ထားကောင်းနဲ့ နှလုံးသားကို အလှမပြင်ဘူး။
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ရုပ်သိပ်မလှ ရွက်ကြမ်း ရေချို။ အ၀တ်မဆင်မပြုမပြင်ကလဲ သာမာန်ပဲ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ထားကောင်းတယ်။ သူများကို မေတ္တာစေတနာထားတယ်။ ကူညီစောင့်ရှောက်တယ်။ စိတ်ထားကောင်းတော့ နှလုံးသားက လှနေတယ်။
အများအမြင်မှာ ဒုတိယမိန်းကလေးက အေးချမ်းကြည်လင်ရှုခြဖွယ်၊ တင့်တယ်လှပနေပါလိမ့်မယ်။ အများအမြင်လှချင်ရင် နှလုံးသားကို အလှပြင်ပါ။
တချို့က ရုပ်လှတယ်။ ဥပဓိရုပ်မကောင်းဘူး။ တချို့က ရုပ်မလှပေမဲ့ ဥပဓိရုပ်ကောင်းတယ်။ တချို့က ရုပ်လဲလှ၊ ဥပဓိရုပ်လည်းကောင်းတယ်။ တချို့က ရုပ်လဲ မလှ၊ ဥပဓိရုပ်လည်း မကောင်းဘူး။
ဥပဓိရုပ်ကောင်းတာဟာ ရုပ်လှတာထက်ပိုပြီး တန်ဘိုးကြီးတယ်။ ဥပဓိရုပ်ဟာ လူရဲ့စိတ်ထားနဲ့ ဆိုင်တယ်။ စိတ်ကောင်းရှိရင် ဥပဓိရုပ်ကောင်းတယ်။ စိတ်ကောင်းမရှိရင် ဥပဓိရုပ်မကောင်းဘူး။ စိတ်ကောင်းရှိခြင်းဖြင့် ဥပဓိရုပ် တင့်ပါစေ .....
****** ပန်းကလေးက ဆုတောင်းလိုက်တယ်နော် *************
လူုတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀မှာ ... စိတ်ကောင်းရှိဖို့ အရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ ပညာရှာ၊ စီးပွားရှာ၊ လုပ်ငန်းလုပ်ရာ၊ ပေါင်းသင်းရာ ကိစ္စတိုင်းမှာ စိတ်ကောင်းရှိဖို့လိုပါတယ်။ စိတ်ကောင်းရှိခြင်းဟာ လူတစ်ယောက်အတွက် အကောင်းဆုံးဂုဏ်ပါပဲ။
စိတ်ကောင်းရှိချင်ရင် အကောင်းတဲ့စိတ်ထားတွေ ရှောင်ရမယ်။ ဒေါသမာနကြီးလွန်းတာ၊ ရန်ညှိုးထားတာ မနာလိုဝန်တိုတာ၊ လိမ်ညာလှည့်စားတာ၊ ယုတ်မာရက်စက်တာ၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်းတာ၊ အနိုင်ကျင့်တာ၊ မတရားပြုတာတွေဟာ မကောင်းတဲ့စိတ်ထားတွေဖြစ်တယ်။ အဲဒီ မကောင်းတဲ့စိတ်တွေ ကိုယ့်မှာရှိနေရင် စိတ်ရ့င်းမကောင်းတဲ့ လူပဲ။ လူယုတ်မာ၊ လူညံ့၊ လူဆိုးဖြစ်ပြီး အကျည်းတန်ပြီ။ လူတိုင်း စက်ဆုပ်ရွံမုန်းကြ မယ်။ မကောင်းတဲ့ စိတ်တွေကိုယ်သန္တာန်မှာမရှိအောင် ဆင်ခြင်ပါ။ ဖြစ်နိုင်သမျှ နည်းအောင်၊ ကင်းအောင် ရှောင်ရမယ်။
ကောင်းတဲ့စိတ်ထားဖြစ်တဲ့ သူတစ်ပါးကို မေတ္တာထားခြင်း၊ ကြင်နာခြင်း၊ ကူညီစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ကယ်တင်ခြင်း၊ ကိုယ်ချင်းစာခြင်း၊ တရားမျှတခြင်း၊ သူတပါးအောင်မြင်ချမ်းသာရင် ၀မ်းသာဂုဏ်ပြုတတ်ခြင်း ဆိုတာတွေဟာ ကောင်းမြတ်တဲ့ စိတ်ထားတွေဖြစ်တယ်။
မကောင်းတဲ့ စိတ်တွေရှောင်ပြီး ကောင်းတဲ့စိတ်တွေ ဆောင်ခြင်းဖြင့် လူတိုင်းချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့ စိတ်ကောင်းရှိသူ ဖြစ်ပါစေ ...........
* ** သူငယ်ချင်းတို့လဲ စိတ်ကောင်းလေးထားပေးနော် * ** ** *
Posted by နှင်းပွင့်လေး at 11/01/20090comments Links to this post
“ရထားဖြတ်သွားတိုင်း ကျွန်မတို့ အိမ်က ကုတင်က လှုပ်နေတတ်တယ်” ဟု အမျိုးသမီး တစ်ဦးက အိပ်ရာကုတင်
ရောင်းသော လူကိုဖုန်းဆက်သည်။ ထိုလူလာရောက် စစ်ဆေးသောအခါ ထိုလူအား ကုတင်ပေါ်တွင် လှဲလှောင်းစေ
ပြီး ရထားလာချိန်တွင် ကုတင်လှုပ် မလှုပ် ကိုယ်တွေစမ်းသပ်ခိုင်းသည်။ ထိုလူကုတင်ပေါ်လှဲအချတွင် အမျိုးသမီး၏
“ကျုပ်မိန်းမ ကုတင်ပေါ်မှာ ခင်ဗျားဘာလုပ်နေသလဲ” ဟု မေးရာ ထိုလူက
“ကျွန်တော် ရထားစောင့်နေတယ်လို့ ပြောရင် ခင်ဗျားယုံမလား” ဟု ပြန်ဖြေသည်။
အမှန်ပြောသော စကားအချို့သည် လိမ်နေသည်နှင့် တူပြီး လိမ်ပြောသော စကားအချို့သည် သံသယမရှိ ယုံကြည်
တစ်ခါက အမျိုးသား တစ်ဦးနှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဦးတို့ ရထားပေါ်တွင် ဆုံကြသည်။ အမျိုးသမီးက အမျိုးသားအား
မြူဆွယ်ချင်သောကြောင့် သူမ အလွန်ချမ်းကြောင်း ပြောသည်။ အမျိုးသားက သူ၏စောင်ကို အမျိုးသမီးအား ခြုံစေ
“ဒါဆို ကျွန်တော်ဘယ်လို ကူညီရမလဲ” အမျိုးသားမှာ စိတ်မသက်မသာဖြင့် ပြောသည်။
“ကျွန်မ ငယ်ငယ်ကဆို အမေက သူ့ကိုယ်ငွေ့နဲ့ ကျွန်မကို နွေးစေတယ်”
“ဒီလိုဆို ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှ မကူညီနိုင်ပါဘူး ခင်ဗျား..ကျွန်တော် ရထားပေါ်က ခုန်ချပြီး ခင်ဗျားအမေကို လိုက်ရှာ
Franklin Delano Roosevelt အမေရိကန်သမတ္တ မဖြစ်ခင် နေအိမ်တွင် အခိုးခံရဖူးသည်။သူငယ်ချင်းများက အကျိုး
“လာရောက်မေးမြန်းကြတဲ့ အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်.ကျွန်တော် ဘာမှမဖြစ်တဲ့အပြင် ကျွန်တော်စိတ်ဟာ
ကျွန်တော် ၀မ်းအသာဆုံးက သူခိုးဟာ တစ်ခြားလူဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် မဟုတ်လိုပါပဲ”
Winston Churchill (British Prime Minister 1874-1965) တစ်ခါက ဟောပြောပွဲတွင် စင်အောက်မှ လူတစ်ဦးက
စာတစ်စောင် လှမ်းပေးသည်။ စာထဲတွင် (လူပြိန်း) ဟုသာရေးထားသည်။ စင်အောက်တွင် သူ့အား ကန့်ကွက်မည့်
သူများ သူအား အရှက်ကွဲစေရန် လုပ်လိုက်ကြောင်း သူသိလိုက်သည်။ Churchill မှာ ဘာမှ မဖြစ်သည့်ပုံစံဖြင့် ...
“ကျွန်တော် စာတစ်စောင် ရလိုက်တယ်... စာရေးသူဟာ စာထဲမှာ အကျိုးအကြောင်း ရေးဖို့မေ့ပြီး သူ့နာမည်ပဲရေး
စိတ်မဆိုးသည့်အပြင် ဟာသနှောပြီးတစ်ဖက်လူအား အလိမ္မာနည်းဖြင့် အနိုင်ယူလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကြိုပြောထားမယ်နော်။ ဒီဟာသက နည်းနည်းဝါ(ပြာ)တယ်။ အမြင်တစ်မျိုး ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဆက်မဖတ်တာ အကောင်းဆုံးပဲး) မဖတ်ပါနဲ့ဆိုမှ ပိုဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ဆက်ဖတ်ပေါ့နော်း) တစ်ခါတလေတော့လည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အသံထွက်အောင် အော်ရီကြည့်ကြတာပေါ့နော် .. ဟား..ဟား..ဟား
“ ဒါ ဘာလုပ်တာလဲ”
“ဘာမှ မ၀တ်ဘဲ စောင့်နေရသလား”
“ဒါကို ည၀တ်အိပ် အချစ်အင်္ကျီလို့ ခေါ်တယ်”
“လုံးဝ ၀တ်မထားတာကို ဘာ ည၀တ်အင်္ကျီလို့ ခေါ်တာလဲ”
“ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ယောက်ျားက ဒီည၀တ်အင်္ကျီကို ကြိုက်တယ်ရှင့်”
တအောင့်ကြာတော့ အဘိုးအို ပြန်ရောက်လာတယ်။ အ၀တ်ဗလာနဲ့ ရပ်နေတဲ့ အဘွားအိုကို မြင်တော့ လန့်ပြီး “ဒါ ဘာလုပ်တာလဲ” လို့ အော်လိုက်တယ်။
“ဒါ ည၀တ် အချစ်အင်္ကျီလေ” လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တော့ အဘိုးအိုက
“ ဟာ မင်းည၀တ်အင်္ကျီက မီးပူထိုးသင့်နေပြီ။ ကြည့်စမ်း ဟိုကြယ်သီးနှစ်လုံးကလဲ ပြုတ်ထွက်တော့မယ်” လို့ ပြန်ပြောလိုက်သတဲ့။
အင်ဂျင်နီယာ-----“ဘာများ ၀န်ဆောင်ပေးရမလဲ ခင်ဗျာ။”
ဧည့်သည်--------“နှလုံးသားမှာ အချစ်ကို တပ်ဆင်မလို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ ဘယ်လို တပ်ဆင်ရမလဲဆိုတာကို တဆင့်ခြင်း ပြောပြလို့ရမလား။
အင်ဂျင်နီယာ-----“ရပါတယ်. . .တပ်ဆင်ဖို့အဆင့်သင့်ဖြစ်ပြီလား။”
ဧည့်သည်---------“ဟုတ်ကဲ့။ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ.ဒါပေမဲ့ နည်းပညာတွေကို သိပ်နားမလည်လို့ ပထမဦးဆုံး ဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုတာကို ပြောပြပါလား။”
အင်ဂျင်နီယာ----“ပထမအဆင့် အနေနဲ့ ရင်ဘတ်ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ နှလုံးသားကို ရှာတွေ့ပြီလား။”
ဧည့်သည်------“တွေ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ တချို့ပရိုဂရမ်တွေ အလုပ်လုပ်နေတာ တွေ့ရတယ်။ သူတို့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အချိန် အချစ်ကို တပ်ဆင်ရမှာ အခက်အခဲ ရှိနိုင်လား။”
ဧည့်သည်--------“အင်း... ဒဏ်ရာဟောင်း၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်စိတ်၊ မနာလို ၀န်တိုစိတ်၊ နာကျည်းစိတ်တွေက အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။
အင်ဂျင်နီယာ-----“ကိစ္စမရှိပါဘူး. . .အချစ်ကိုတပ်ဆင် လိုက်တာနဲ့ အချစ် ဒဏ်ရာဟောင်းကို စစ်စတန်(system) ကနေ ဖျက်လိုက်မှာပါ။ အဲဒီ ဒဏ်ရာဟောင်းက မှတ်ဥာဏ် (memory)ထဲမှာ ကျန်ချင်ကျန်ခဲ့လိုက်မယ်။ ဒါပေမဲ့ တခြား ပရိုဂရမ်တွေကိုတော့ အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေပါဘူး။ အချစ်မှာ ရှိတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်က တကိုယ်ကောင်းဆန်စိတ်ကို ဖုံးသွားလိမ့်မယ်။ မနာလိုစိတ်နဲ့ နာကျည်းစိတ်တွေကို အရင်ပိတ်ပစ်ရဦးမယ်။ နို့မဟုတ်ရင် အချစ်ကို တပ်ဆင်ရာမှာ အခက်အခဲ ရှိလိမ့်မယ်။ သူတို့ကို ပိတ်ပစ်နိုင်မလား ”
ဧည့်သည်-------“သူတို့ကို ဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ? ပြောပြနိုင်မလား”
အင်ဂျင်နီယာ----“ရပါတယ်... ခွင့်လွတ်စိတ်ကို ရွေးပြီး ရမ်း(run)လိုက်ပါ။ မနာလို ၀န်တိုစိတ်နဲ့ နာကျည်းစိတ်တွေ လုံးဝပျောက်သွားတဲ့အထိ ထပ်သလဲလဲရမ်းပေးပါ”
ဧည့်သည်--------“ကောင်းပြီလေ...အချစ်ကို တပ်ဆင်လို့ ပြီးပါပြီ။ ဒါပုံမှန် ဟုတ်ပါသလား”
အင်ဂျင်နီယာ-----“ဟုတ်ပါတယ်…ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ အခြေခံအဆင့်ပဲ ရှိသေးတယ်။ အချစ်ကို တခြားနှလုံးသား တခုနဲ့ ဆက်သွယ်ပေးလိုက်မှ သူဟာ အဆင့် ထပ်တိုးသွားနိုင်တယ်။”
ဧည့်သည်--------“ဟာ မှားယွင်းနေကြောင်း အသိပေးချက် ပေါ်လာပါလား? အချစ်ပရိုဂရမ်ဟာ အခြားတစ်ခုမှာ အလုပ် မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?”
အင်ဂျင်နီယာ-----“စိတ်မပူပါနဲ့...အချစ်ဆိုတဲ့ အရာဟာ အတွင်းစိတ်ကနေပဲ အလုပ်စလုပ်တယ်လို့ ပြောတာပါ။ လွယ်လွယ် ပြောရရင် အချစ်ကို တခြားနှလုံးသားတစ်ခုနဲ့ မဆက်သွယ်ခင် ကိုယ့်ကိုယ်အရင် ချစ်ဖို့ပါပဲ”
အင်ဂျင်နီယာ----“ကိုယ့်ကို လက်ခံတဲ့ ဖိုင်ကို ရွေးလိုက်ပါ။ ဒီဖိုင်ထဲက “ကိုယ့်ကို ခွင့်လွတ်မူ” “ကိုယ့်တန်ဖိုးကို ကိုယ်နားလည်မူ” နဲ့ “ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ကန့်သတ်မူ” ဆိုတဲ့ ဖိုင်တွေကို ကော်ပီလုပ်ပြီး ရင်ဘတ်ထဲကို ထည့်လိုက်ပါ။ တူနေတဲ့ ဖိုင်တွေကို ဖုံးသွားမှာပါ။ ဝေဖန်တတ်တဲ့ စိတ်ကိုလည်း ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ။ နောက်ပြီး(recycle bin)ထဲက ရှိသမျှအားလုံးကိုလည်း ဖျက်လိုက်ပါ”
ဧည့်သည်-----“အင်း..ကောင်းပါပြီ။ နှလုံးသားမှာ ဖိုင်အသစ်လေးတွေ ထွက်လာတာ မြင်နေရပြီ...စခရင် မျက်နှာပေါ်မှာ အပြုံးလေးတွေ တွေ့နေရပြီ။ “တည်ငြိမ်ခြင်း” နဲ့ “စစ်မှန်ခြင်း”က နှလုံးသားမှာ အပြည့် ကော်ပီကူးထားတယ်။ ဒါဟာ ပုံမှန် ဟုတ်ပါသလား”
အင်ဂျင်နီယာ-----“ပုံမှန်ပါပဲ...တခါတလေ ဒီိလိုပဲ အဆင်ပြေသွားတတ်တယ်။ တခါတလေတော့လည်း စောင့်ရတတ်တယ်။ အခုဆိုရင် အချစ်ကိုတပ်ဆင်လို့ ပြီးသွားပြီ။ စတင် အလုပ်လုပ်နေပြီ။
အချစ်ဆိုတာ လူတိုင်းရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဖရီးဆော့ဝဲလ် တစ်ခုလို့ ကျွန်တော်ပြောဖို့ မေ့သွားတယ်။ အဲဒီ ဆော့ဝဲလ်နဲ့ သူ့ထဲက ဖိုင်တွေကို တခြားလူနဲ့ မျှဝေဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ အဲဒီ လူတွေကလည်း တခြားလူတွေကို ထပ်ပြီး မျှဝေပေးကြမှာပါ။ နောက်ဆုံး အရမ်းကောင်းတဲ့ ဖိုင်တစ်ချို့ ကိုယ့်စီ ပြန်ရောက်လာမှာပါ”
အချိန်တွေက အကုန်မြန်လိုက်တာ တစ်လတစ်လဆို ခဏလေးပဲ။ ဘာလိုလိုနဲ့ ၂၀၀၈ဇန်န၀ါရီက မျက်စိတမှိတ်မှာ လှစ်ခနဲ ပျောက်သွားခဲ့တယ်။ ကျွန်မချစ်တဲ့ လတွေထဲမှာ ဒီဇင်ဘာပြီးရင် ဖေဖော်ဝါရီလဲ အပါအ၀င်ပဲ။ ရက်မစေ့တဲ့ လဖြစ်ပေမဲ့ အထိမ်းအမှတ်နေ့တွေနဲ့ ပြည့်နေလို့ပါပဲ။ ဖေဖော်ဝါရီ (၇)ရက် နှစ်သစ်ကူးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီ(၁၂) ပြည်ထောင်စုနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၃)ရက် ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၄) ချစ်သူများနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၂၈)ရက် လခထုတ်ရက်ပေါ့း) ရိုးရာနှစ်သစ်အကြောင်း၊ ကြည်နူးစရာ ချစ်သူများနေ့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကို ဘလော့မှာ တစ်လှည့်စီတင်သွားပါ့မယ်။ အချစ်တွေ ဖောင်းပွပြီး မျက်စိနောက်ခဲ့ရင် အပျိုကြီး စိတ်ကူးအယဉ်လွန်နေတယ်လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့လို့.....
မနှစ်က “ချစ်သူများနေ့ ဘာကြောင့်ဖြစ်” ဆိုတာကို တင်ပြီးတဲ့နောက် ဒီနှစ်မှာ ချစ်သူများနေ့ရဲ့ လက်ဆောင်အကြောင်းကို ရေးချင်ပါတယ်။ ပန်းတကာပန်းထဲမှာ နှင်းဆီပန်းကို “အချစ်ပန်း” လို့ တင်စားရင် မှားမယ် မထင်ပါဘူး။ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၄)ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မဲ့ ချစ်သူများနေ့မှာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို နှင်းဆီပန်းတွေပေးပြီး ရင်ထဲက ခံစားမှုတွေကို ထုတ်ဖော်နိုင်အောင် နှင်းဆီအပွင့်ရေရဲ့ ကိုယ်စားပြုတွေကို အင်တာနက်မှာ ရှာပြီး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
(.. ချစ်နိုင်ကြပါစေး)
အချစ်ဆိုတဲ့ အရာက လူကို ပျော်ရွှင်မှုတွေ သယ်ဆောင်ပေးသလား?
ချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အချစ်တွေ ချိုမြိန်ခဲ့သလား? ခါးသက်ခဲ့သလား?
အချစ်ကို သိချင်နေတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ဟာ အဖြေရှာဖို့ ထွက်လာခဲ့တယ်။ လမ်းမှာ အသဲကွဲနေတဲ့ မိန်းမငယ်တစ်ယောက်ကို တွေ့လို့ မေးတော့ “အချစ်က လူကို နာကျင်စေလွန်းတယ်။ အချစ်က ငါ့အနားကနေလည်း ထွက်သွားရော ငါ့ဝိညာဉ်တွေပါ ယူသွားခဲ့တယ်” လို့ ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။
လူငယ်ဟာ ရှေ့ဆက်သွားပြီး တစ်နေရာမှာ ချစ်သူနှစ်ယောက်ကို တွေ့တော့ မေးပြန်တယ်။ ချစ်သူနှစ်ယောက်က မတိုင်ပင်ဘဲ “ အချစ်က လူကို သိမ့်မွေ့နူးညံ့စေတယ်။ မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ ပေးတယ်။ အဲဒီစိတ်ကူးကို ကျွန်တော်တို့ အကောင်အထည် ဖော်ကြတော့မယ်” လို့ ပြိုင်တူ ဖြေခဲ့ကြတယ်။
မတူညီတဲ့ အဖြေတွေ ကြားပြီးနောက် လူငယ်ဟာ လက်ရှိ ရှင်သန်နေတဲ့အချိန်၊ လက်ရှိ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေမှာ အရာရာကို အကောင်းမြင်သူတွေက ဘယ်အရာကိုမဆို ကြည်ကြည်နူးနူး ခံစားကြပြီး အရာရာကို အဆိုးမြင်သူတွေက ဘယ်အရာကိုမဆို ခါးသက်တယ်လို့ ခံစားနေကြရတယ်လို့ မှတ်ချက်ချလိုက်တယ်။
ကိုယ်သိချင်တဲ့ အဖြေကို သိခဲ့ပြီလို့ ထင်ပြီး လူငယ်ဟာ နေအိမ်ကို လှည့်ပြန်ခဲ့တယ်။ လမ်းမှာ အဘိုးအိုတစ်ဦးနဲ့ တွေ့ပြန်တယ်။ ဒါနဲ့ လူငယ်က အဘိုးအိုကို ထပ်မေးလိုက်ပြန်တယ်။
“ပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ အချစ်အတွက် ထိခိုက်မနေပါနဲ့၊
ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အချစ်အတွက် ပြုံးလိုက်ပါ” လို့ အချစ်ကို ဖွင့်ဆိုလိုက်တယ်။
သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုရဲ့ နောက်ဆုံးသင်တန်းချိန်က "အိမ်ထောင်ရေး၏ လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ထီထွင်မှု" အကြောင်းဖြစ်တယ်။ ဟောပြောမယ့်ဆရာက အတန်းထဲဝင်လာပြီး အသင့်ယူလာတဲ့ ကားချပ်တစ်ချပ်ကို ကျောက်သင်ပုန်းပေါ် ချိတ်ဆွဲလိုက်တယ်။ ကားချပ်ပေါ်မှာက "အောင်မြင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေး အချက်နှစ်ချက်" ဆိုပြီး
၁) လူကောင်းတစ်ယောက်ကို ရှာပါ။
၂) ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လူကောင်းဖြစ်အောင် လုပ်ပါ... လို့ ရေးထားတယ်။
ဆရာက "အောင်မြင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးက ဒီလောက်ပဲ လွယ်ကူပါတယ်။ တစ်ခြားအောင်မြင်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုလည်း သက်ကြီးရွယ်အိုတွေဆီက အမြဲကြားဖူးကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်" လို့ စကားစလိုက်တာနဲ့ သင်တန်းသားတွေဆီက တွတ်ထိုးသံတစ်ချို့ ထွက်လာတယ်။ သင်တန်းသားအများစုက အိမ်ထောင်ရှိသူတွေ ဖြစ်ကြတယ်။
တအောင့်ကြာတော့ အသက် ၃ဝအရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ထရပ်ပြီး "တကယ်လို့ ဒီအချက် နှစ်ချက်စလုံးကို မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ရော? " လို့ ဆရာ့ကိုမေးတယ်။
ဆရာက "မလုပ်နိုင်ခဲ့ရင် အချက်(၄)ချက် ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်" လို့ ပြောပြီး နောက်ကားချပ်တစ်ခုကို ချိတ်ဆွဲလိုက်တယ်။
၁) သည်းခံပါ၊ ကူညီပါ။ ကူညီတာ အလိုမကျရင် သည်းခံပါ။
၂) သည်းခံတာကို အကျင့်ဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။
၃) တုံးအတဲ့ စရိုက်လေးပါအောင် ကျင့်ပါ။
၄) တုံးအအ စရိုက်ကို တစ်သက်လုံး ကျင့်သွားပါ။
အချက် (၄)ချက်ကို ဆရာရွတ်မပြီးခင် သင်တန်းသားတွေ လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဖြစ်လာကြတယ်။ ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ဒီလိုလုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ တီးတိုးသံတစ်ချို့ လွှင့်လာတယ်။ အားလုံး ငြိမ်သက်သွားချိန်ရောက်မှ ဆရာက "တည်ငြိမ်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခု ရှိချင်တယ်။ ဒီ (၄)ချက်ကိုလည်း မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် အောက်က အချက် (၁၆) ချက်ကို လုပ်နိုင်ရမယ်" လို့ ပြောလိုက်တယ်။
ဆရာက နောက်ကားချပ်တစ်ချပ်ကို ချိတ်ဆွဲလိုက်ပြန်တယ်။
၁) မတူတဲ့အချိန်မှာ စိတ်တို၊ ဒေါသထွက်ကြပါ။
၂) ရေးကြီးခွင်ကျယ် မဟုတ်ခဲ့ရင် စကားပြောတဲ့အချိန် အော်မပြောပါနဲ့။
၃) ရန်ဖြစ် အငြင်းပွါးတဲ့အခါ တစ်ဖက်လူကို အနိုင်ပေးလိုက်ပါ။
၄) ဒီနေ့ငြင်းခုံတာကို မနက်ဖြန်အထိ သယ်မသွားပါနဲ့။
၅) ငြင်းခုံရန်ဖြစ်ပြီး အမေအိမ်ပြန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အပြင်ထွက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန် ၈နာရီထက် မကျော်ပါစေနဲ့။
၆) ဝေဖန်တဲ့စကားမှာ မေတ္တာပါပါစေ။
၇) ကိုယ့်အမှားကို တောင်းပန်တတ်ဖို့ အမြဲအသင့်ပြင်ထားပါ။
၈) ကိုယ့်အကြောင်း သွားပုပ်လေလွှင့် အတင်းကြားတဲ့အခါ ဟာသလို သဘောထားပြီး ရီပစ်ပါ။
၉) တစ်လကို တစ်ညလောက် သူ (သူမ) အတွက် လွတ်လပ်တဲ့အချိန်ပေးလိုက်ပါ။
၁ဝ) ဒေါသစိတ်နဲ့ အိပ်ရာမဝင်ပါနဲ့။
၁၁) သူ (သူမ) အိမ်ပြန်ချိန်မှာ ကိုယ်အိမ်မှာ ရှိနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ။
၁၂) တစ်ဖက်လူက မနှောင့်ယှက်စေချင်ရင် မနှောင့်ယှက်မိအောင် ကြိုးစားပါ။
၁၃) ဖုန်းမြည်တဲ့အချိန် တစ်ဖက်လူ အရင်ကိုင်ပါစေ။
၁၄) အိတ်ကပ်ထဲ ငွေဘယ်လောက်ရှိတယ် ဆိုတာကို အမြဲစာရင်းပေးပါ။
၁၅) ငွေမရှိတဲ့နေ့ရက်ကို ဖျက်ဆီးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
၁၆) ကိုယ့်မိဘကို ပေးတဲ့ငွေက တစ်ဖက်မိဘကို ပေးတဲ့ငွေထက် နည်းပါစေ။
(၁၆) ချက်ကို ဆရာရွတ်ပြီးနောက် သင်တန်းသား တစ်ချို့ကရီကြတယ်။ တစ်ချို့က သက်ပြင်းချကြတယ်။ ဆရာက ဆက်ပြီး "တကယ်လို့ ဒီ(၁၆)ချက်ကို မလုပ်နိုင်သေးဆိုရင် အောက်က အချက် (၂၅၆) ချက်ကို လုပ်ရလိမ့်မယ်။ လူနှစ်ယောက် ပေါင်းသင်းတဲ့သီအိုရီက တိုးကိန်းသီအိုရီဖြစ်တယ်။ ရှေ့က အခြေခံအချက်တွေပေါ်မှာ နှစ်ထပ်တိုးသွားတာဖြစ်တယ်"
အဲဒီနောက် ဆရာက အချက်(၂၅၆)ချက်ကို ရေးလိုက်တယ်။
" ဒီအခြေအနေကို ရောက်သွားတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးက အန္တရာယ်နဲ့ အရမ်းနီးနေပြီ" လို့ ပြောပြီး သင်ခန်းစာကို အဆုံးသတ်လိုက်ချိန်မှာ တစ်ခန်းလုံး လက်ခုပ်သံတွေ ဟိန်းသွားခဲ့တယ်။ ဟောပြောပွဲပြီးကြောင်း ကြေညာခဲ့ပေမယ့် တစ်ချို့သင်တန်းသားတွေက မလှုပ်မယှက် ထိုင်နေခဲ့ကြတယ်။ သူတို့မျက်နှာပေါ်မှာ မျက်ရည်တွေ စီးဆင်းနေခဲ့တယ်။
original from : http://www.ntuee78.org/essay
ညနေခင်းလေးတစ်ခု... လှပတဲ့ ဆည်းဆာနေရောင်က လောကတစ်ခွင်ကို ဖြန့်ကြက်ထားတယ်။ ရှည်လျှားတဲ့ လမ်းမထက်က စက်ဘီးလေး တစ်စီးပေါ်မှာ ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို တင်နင်းထားတယ်။
"ငါ့ကို ဘယ်အချိန်ထိ ချစ်မှာလဲ! "
ကောင်လေးခါးကို ပွေ့ဖက်ထားတဲ့ ကောင်မလေးက ကောင်လေးကျောကို မှီပြီး ခပ်တိုးတိုးလေး မေးတယ်။ ကောင်လေးရဲ့အဖြေက ကောင်မလေး စိတ်ကျေနပ်လောက်တဲ့ အမှတ်ပြည့်အဖြေ မဟုတ်မှန်း ကောင်မလေးသိနေခဲ့တယ်။
"ချစ်စရာ စကားလေးတွေနဲ့ ဖြေဖို့ အခွင့်အရေးပေးမယ်" ကောင်မလေးက ချွဲနွဲ့ပြီးပြောတော့ ကောင်လေးက စိတ်ပါလက်ပါ စဉ်းစားလိုက်တယ်။
မီးနီနေတုန်း ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို လက်"တစ်"ချောင်းထောင်ပြပြီး အဖြေပေးလိုက်တယ်။ ကောင်မလေးက ဝမ်းသာအားရ "တစ်သက်လုံး! " လို့ ပြောတယ်။
ကောင်လေးရီလိုက်တယ်။ ကောင်မလေးရဲ့ အပြောမှန်သွားလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်မလေးဆီက အပျော်တွေ ကူးစက်သွားလို့ဖြစ်တယ်။ မီးစိမ်းတော့ ကောင်လေးက စက်ဘီးကိုဆက်နင်းပြီး ကောင်မလေးကို တိုးတိုးလေး ပြောတယ်။
"နင့်ကိုငါ ဒီလိုအဖြေမျိုးပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုအဖြေမျိုးက လူတိုင်းဖြေတတ်တဲ့အတွက် မစစ်မှန်သလိုပဲ... ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါအုန်း"
ကောင်လေးစကားကို ကောင်မလေးက ခေါင်းညိတ်ထောက်ခံရင်း "ဒီလိုဆိုရင် တစ်ရက်လား?"
"ဟား..ဟား ငါတို့ချစ်တာတောင် နှစ်လကျော်နေပြီ။ တစ်ရက်၊ တစ်ပတ်၊ တစ်လဆိုတဲ့ အဖြေမျိုးက မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ"
ကောင်လေးအပြောမှာ ကောင်မလေးရောယောင် ရီရင်း " တခဏတော့ မဟုတ်ရပါဘူးနော်" လို့ အသံကျယ်ကြီးနဲ့ မေးတယ်။
ကောင်မလေးအပြောကြောင့် စက်ဘီးလဲမတတ် ကောင်လေးအော်ရီမိတယ်။ ကောင်မလေးရဲ့ ဒီလို ရွတ်နောက်နောက်အပြောနဲ့ ကြည်လင်တဲ့ ရယ်သံတွေကို ကောင်လေး အရမ်းချစ်ခဲ့တယ်။ ကောင်မလေးရဲ့လက်ကို ကောင်လေးတင်းတင်းလေး ဆုတ်ကိုင်ထားလိုက်တယ်။
"ဒီလိုဆိုရင် တစ်နှစ်လား?" ကောင်လေး ခေါင်းခါပြလိုက်တယ်။
"ဒီလိုဆိုရင် နှစ်တစ်ရာကွာ... ငါ့ကို နှစ်တစ်ရာချစ်ရင် ရပြီ" ကောင်မလေးက စိတ်မရှည်ဘဲ ပြောနေပေမယ့် မျက်နှာပေါ်မှာ အပျော်ရိပ်တွေ သမ်းနေခဲ့တယ်။
"နှစ်တစ်ရာ! မတိုလွန်းဘူးလားကွာ.. နှစ်တစ်ရာနဲ့ ငါနင့်ကို ချစ်လို့ မဝနိုင်ဘူး" ကောင်လေးရဲ့ စကားလက်နက်က ကောင်မလေးရဲ့နှလုံးသားထဲ စူးစူးနစ်နစ် ထိုးစိုက်သွားတယ်။ ကောင်မလေးရဲ့ တိုးညှင်းညှင်းရီသံက ကောင်လေးကို မီးနီဖြတ်မောင်းရဲတဲ့ အင်အားတွေ ပေးခဲ့တယ်။
"အဖြေကို သိချင်ပြီလား?" ကောင်လေး ဖြေချင်နေပြီ။
"ငါ့ကို ဘယ်အချိန်ထိ ချစ်မှာလဲ?" ကောင်မလေးလည်း အဖြေကို ကြားချင်နေပြီ။
ကောင်လေးက လက်တစ်ချောင်းထောင်ပြရင်း "နင်ငါ့ကို မချစ်တော့တဲ့ တစ်နေ့အထိ ငါချစ်နေမယ်"
ကောင်လေးစကားကြောင့် ကောင်မလေး ငေးငိုင်သွားခဲ့ရတယ်။
နင်ငါ့ကို မချစ်တော့တဲ့ တစ်နေ့အထိ ငါချစ်နေမယ်!
အဲဒီတစ်နေ့က ဘယ်လောက်ကြာနိုင်မလဲ? တိုနိုင်သလို ၊ ရှည်နိုင်တယ်။ ထာဝရ၊ တခဏလဲ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် တိကျတဲ့ အဖြေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
**** ပန်းကလေးဖတ်မိတဲ့ ဘလော့ဂ်တစ်ခုထဲကပါ။ *********
တစ်ခါတလေမှာ သူဟာ ကလေးဆိုးကြီးနဲ့ တူတတ်တယ်။
ရုံးဝတ်စုံကို ချွတ်ပြီးနောက် သူ့ပုံစံကို တစ်မျိုးပြောင်းခွင့်ပေးလိုက်ပါ။
သွယ်ဝိုက်ပြီး အကြိမ်ကြိမ် သတိပေးမှ ကိုယ့်မွေးနေ့ကို မှတ်မိတတ်တဲ့သူ့ကို ခွင့်လွတ်နားလည်ပေးပါ။
တကယ်တော့... သန်မာထွားကြိုင်းတဲ့ သူ့ခန္ဓာအောက်က အသဲနှလုံးတစ်စုံဟာ
သူ့ဆီမှာ ကိုယ်တောင်းဆိုတဲ့အရာတွေက ကိုယ့်မိခင်ဆီ ကိုယ်တောင်းဆိုတဲ့အရာလို သဘာဝကျပါသလား?
ချိုမြိန်တဲ့ စကားတွေ သူ့ကိုနည်းနည်း ပိုပေးလိုက်ပါ။
သေးငယ်တဲ့ သူ့ရဲ့လက်တွေ နောင်တစ်ချိန်မှာ ဘယ်လိုလက်ဖဝါးကြီးမျိုး ဖြစ်နိုင်မလဲ?
ရီပို့ကတ်ပေါ်က အမှတ်တွေကို သူ့ဆီက ကိုယ်တောင်းဆိုသလို ပတ်ဝန်းကျင်၊ သဘာဝတရားတွေကို သူခံစားတတ်အောင် သင်ပေးပါ။
စိတ်ဓာတ်တွေ သန်မာကြံ့ခိုင်အောင် သင်ပေးသလို နူးညံ့ပျော့ပျောင်းတဲ့ နှသားသားတစ်စုံ ရှိသင့်ကြောင်းလည်း ပြောပြပါ။
သူကြီးပြင်းရာ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ လမ်းညွှန်ဆုံးမသူအဖြစ် အဖော်ပြုပေးပါ။
ကိုယ့်သားသမီးတွေရဲ့ ငိုသံက ကိုယ့်မိဘတွေရဲ့ သက်ပြင်းချသံထက် ပိုကြင်နာမှုရခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ်အိမ်ပြန်ချိန်ကို မျှော်နေတတ်တဲ့ မိဘတွေရဲ့ ဂရုစိုက်မှုကိုတော့ ကိုယ်လျှစ်လျှူရှူမိတတ်တယ်။
အရေးကြီးတာက မိဘတွေကို ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေ နည်းနည်းပိုပေးဖို့ပါပဲ။
နှလုံးသားချင်းထပ်ပြီး နှစ်ယောက်အတူ ချစ်ဖို့ရာ မလွယ်ကူပါဘူး။
youthwant.com.tw မှာဖတ်မိတာလေးပါ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ဇနီးရဲ့ ခံစားမှုဘဏ်တိုက်ထဲ သင်ဘာတွေစုဆောင်းသင့်သလဲ?
၁) မနက်ခင်းမှာ နွေးထွေးတဲ့ ပွေ့ဖက်မှုတစ်ခုပေးပါ
၂) သူ့အစား ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်ဖျော်ပါ
၃) သူ့အစား အိပ်ရာခင်းတွေ ခေါက်ကူပါ
၄) ညအချိန်မှာ အမှိုက်သိမ်း/ သွန်ကူပါ
၅) ကလေးကို ကျောင်းပို့ပါ
၆) သူ့မိဘကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံပါ
၉) အိမ်စရိတ် ကူညီထောက်ပံ့ပါ
၁ဝ) ဂရုစိုက်၊ နွေးထွေးတဲ့စကားတွေပြောပါ
ခင်ပွန်းရဲ့ ခံစားမှုဘဏ်တိုက်ထဲ သင်ဘာတွေစုဆောင်းသင့်သလဲ?
၁) အလုပ်ကပြန်လာတဲ့သူ့ကို ကြိုဆိုပါ
၂) သူ့အလုပ်အကိုင်ကို ဂရုပြု(စောင့်ရှောက်)ပါ
၃) ညစာကို စားချင်စဖွယ်ပြင်ဆင်ပါ
၄) သူ့စိတ်လိုအင်ကို ဖြည့်ပါ
၅) မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်မှာ သူအံ့သြပျော်ရွှင်အောင် လက်ဆောင်ပေးပါ
၆) သူ့လုပ်ရည်ကိုင်ရည်၊ သူ့အကျင့်စရိုက်ကို လေးစားတန်ဖိုးထားပါ
၇) အခြေအနေ၊ အချိန်အခါကိုကြည့်ပြီးမှ ပြဿနာကို ဆွေးနွေးတင်ပြပါ
၈) သူနှစ်သက်တဲ့ ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ပါစေ
၉) ကိုယ့်ကိုအမြဲ လှပသန့်ရှင်းအောင် ပြင်ဆင်ပါ
၁ဝ) သူ့မိဘကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ပါ
ချစ်သူရဲ့ ခံစားမှုဘဏ်တိုက်ထဲ သင်ဘာတွေစုဆောင်းသင့်သလဲ?
၁) သူပြောတာ၊ လုပ်တာကို ယုံကြည်ပါ
၂) သူ့ကိုအလေးထား ဂရုစိုက်ပါ
၃) ခွင့်လွတ်နားလည်မှုတွေ ပေးပါ
၄) သူနှစ်သက်တဲ့အလုပ်၊ ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ပါ
၅) သူပြောချင်တာကို နားထောင်ပေးပါ
၆) နေ့တိုင်း ချစ်သူများနေ့လို ချိုချိုမြိန်မြိန်ဖြတ်သန်းပါ
၇) ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားကို ပါးစပ်ဖျားမှာ ချိတ်ထားစရာမလိုပေမယ့်
၈) စိတ်ကြည်နူးစေတဲ့ လက်ဆောင်လေးတွေ တစ်ခါတရံပေးပါ
၉) သူ့အလုပ်ကို ကူလုပ်မပေးခင် ကြည်နူးနှစ်သက်တဲ့ စကားအကောင်းကိုပြောပါ
၁ဝ) သူ့ကောင်းကွက်ကို ပိုမြင်ပြီး ဆိုးကွက်ကို လျှော့ကြည့်ပါ
သူငယ်ချင်းရဲ့ ခံစားမှုဘဏ်တိုက်ထဲ သင်ဘာတွေစုဆောင်းသင့်သလဲ?
၁) သူရင်ဖွင့်တဲ့စကားကို နားထောင်ပေးပါ
၂) သူလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကို ထောက်ခံအားပေးပါ
၃) သူအခက်ခဲကြုံချိန်မှာ ကူညီပါ
၄) သူအမှားလုပ်မိချိန်မှာ လမ်းပြညွှန်ကြားပါ
၅) သူဝမ်းနည်းထိခိုက်ချိန်မှာ ဖေးမအဖော်ပြုပါ
၆) သတိရချိန်မှာ ဖုန်းဆက်ပြီး သူ့ကိုကိုယ်သတိရကြောင်း ပြောပါ
၇) မကြာမကြာ သူရဲ့အခြေအနေ (အဆင်ပြေ မပြေ)ကို ဂရုစိုက်ပါ
၈) စိတ်ဝိညာဉ်ချင်း ဖလှယ်ပါ
၉) ကိုယ့်စီမှာရှိတဲ့ ပျော်စရာ၊ ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေ သူ့အတွက် တစ်ပုံအမြဲရှိပါစေ
၁ဝ) ကိုယ့်ခံစားချက်ကို သူနဲ့အတူ မျှဝေပါ
လူ့ဘဝက ရှုတ်ထွေးပွေလီလှတယ်။ တစ်ခါတရံမှာ ထိန်းချုပ်မှုတွေ ကင်းလွတ်ပြီး ကိုယ့်ချစ်သူ၊ ကိုယ့်ကြင်ဖော်၊ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကို ထိခိုက်နာကျင်တဲ့စကားတွေ ပြောဆိုမိတတ်တယ်။ ခံစားမှုဘဏ်တိုက် အကောင့်လေး overdraft မဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံးနည်းက - ကောင်းတဲ့စကား၊ ကြည်နူးတဲ့စကား၊ ပြုစုယုယမှုတွေ၊ ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်မှုတွေ ပုံမှန်စုဆောင်းတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အသဲကွဲချိန်မှာ အချစ်က ခိုကိုးရာမဲ့ လဲပြိုလို့...
"ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်တော့်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်တာလဲ"
"ဝါသနာနဲ့ မျှော်မှန်းချက်ကိုပဲ လိုချင်ခဲ့တာ"
"ကျွန်တော့်ကို ကောက်ယူပါ။ ကျွန်တော်ဘယ်လောက် တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာ နောက်တော့ ခင်ဗျားသိမှာပါ" အချစ်က ခခယယတောင်းဆိုတယ်။
အချစ်ရဲ့ခယတောင်းဆိုမှုမှာ ကိုယ်တွေဝေနေမိတယ်။ ပြောစရာ စကားလုံး ကိုယ်ရှာမတွေ့ခဲ့ဘူး။ ကိုယ့်အတွေးထဲမှာ အချစ်ကဒြပ်မဲ့ပစ္စည်း.... မမြင်နိုင်ဘူး၊ ဆုပ်ကိုင်လို့မရဘူး။ ဒါကြောင့် အချစ်နဲ့ မျှော်မှန်းချက်ကြားမှာ မျှော်မှန်းချက်ကိုရွေးဖို့ ကိုယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
"ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုကို နားလည်ပေးပါ။ အခုအချိန်မှာ အချစ်က မျှော်မှန်းချက်လောက် အရေးမကြီးဘူးလို့ ကိုယ်ထင်တယ်"
"မလုပ်ပါနဲ့... ကျွန်တော့်ကို လွှတ်မချပါနဲ့ ... ကျွန်တော့်ကိုပေါင်နှံပြီး အလိုရှိတဲ့ ပစ္စည်းနဲ့လဲယူပါ။ တစ်နေ့ ကျွန်တော့်ကို သတိရတဲ့အချိန် ကျွန်တော်ကို ပြန်လာဝယ်ပါ"
"မျှော်မှန်းချက်နဲ့ လွတ်လပ်မှု" စိတ်ထင့်ထင့်နဲ့ ကိုယ်ဖြေတယ်။
ကိုယ့်အချစ်ကို အိတ်တစ်အိတ်ထဲထည့်ပြီး အိတ်ပေါ်အမှတ်တစ်ခုကပ်လိုက်တာကို ကိုယ်လှမ်းမြင်လိုက်တယ်။
"မျှော်မှန်းချက်နဲ့ လွတ်လပ်မှု" ကို ပိုက်ပြီး အပေါင်ဆိုင်က ကိုယ်အပြေးထွက်ခဲ့တယ်။
နောက်ဆုံး အချစ်ရဲ့ ချုပ်နှောင်မှုတွေကင်းခဲ့လို့ ကိုယ်လွတ်လပ်ခဲ့တယ်။ မျှော်မှန်းချက် ကောင်းကင်အောက်မှာ ကိုယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဝဲပျံနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ကာလတစ်ခုအရောက်မှာ "အထီးကျန်ခြင်း" ဆိုသူတစ်ဦးက ကိုယ်သတိမထားမိချိန် ကိုယ့်အနားရောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။ သူ့ကို ကိုယ်ဘယ်လိုမှ ငြင်းပယ်၊ မောင်းထုတ်လို့ မရခဲ့ဘူး။ ဒီလိုအချိန်ခါမျိုးမှာ အချစ်ကို ကိုယ်ပြန်သတိရမိတယ်။ လှပတဲ့ရောင်ခြည်တွေ ယှက်သန်းထားတဲ့ အချစ်ကို ကိုယ်ပြန်လွမ်းဆွတ်မိတယ်။
"၁၉၉၈ခုနှစ် ဇွန်လကအချစ်ကို ပြန်ဝယ်ချင်လို့ပါ"
"ကိုယ်ရဲ့အခုလက်ရှိနဲ့ အနာဂတ် အရာအားလုံး... ပြီးတော့ အသဲနှလုံးတစ်စုံနဲ့ ပြန်ဝယ်မှာပါ" တွေဝေမှုကင်းတဲ့အသံနဲ့ ကိုယ်ပြန်ဖြေတယ်။
အရင်က တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်း ကိုယ်မသိခဲ့လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ လက်ထဲကအချစ် လွတ်မကျအောင် ကိုယ်ဂရုတစိုက်ရှိခဲ့တယ်။ အချစ်ကို ဂရုစိုက်နေခဲ့လို့ ရှေ့ကလမ်းကို ကိုယ်သေချာမကြည့်ခဲ့မိဘူး။ လေပြင်းတိုက်နေတဲ့ ရာသီဥတု အခြေအနေကိုလည်း သတိမရခဲ့ဘူး။ကိုယ်သတိတစ်ချက်အလွတ်မှာ ဒီနှစ်ရာသီရဲ့ နံပါတ်(၃)ခုမြောက် "အမှန်တရား"ဆိုတဲ့ လေပြင်းက ကိုယ့်လက်ထဲက အချစ်ကို လွတ်ကျအောင် တိုက်ခိုက်သွားခဲ့တယ်။
"ဟင့်အင်း.. ဒါ ငါ့အချစ်မဟုတ်ဘူး။ ငါ့အချစ်က ပုလဲတွေ"
"အချစ်ဆိုတာ ပင်လယ်ထဲက သဲတွေပါပဲ။ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ တယုတယ ဂရုစိုက်မယ်။ လွမ်းဆွတ်ခြင်း၊ မျက်ရည်တွေနဲ့ စွတ်စိုစေမှ သူဟာ ကိုယ့်နှလုံးသားထဲ အနယ်ထိုင်ပြီး ပုလဲဖြစ်သွားတာ"
"အချိန်" လို့ ခေါ်တဲ့အဘိုးအိုက မလှမ်းမကမ်းကနေ ကိုယ့်ကိုလှမ်းပြောတယ်။
"အချစ်ကို ခင်ဗျားခွဲထားတာ ကြာခဲ့လို့ ခင်ဗျားရဲ့အချစ်က အရင်လို ပုလဲမဟုတ်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် လေပြင်းရဲ့ဒဏ်ကို သူမခံနိုင်တော့ဘဲ သဲအဖြစ် လွှင့်ပါးသွားခဲ့ရပြီ"
လက်ထဲက သဲတွေကို တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ထားရင်း ကိုယ့်ရင်တွေ တဆစ်ဆစ်နာကျင်နေမိတယ်။ အရင်က တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်း မသိခဲ့ဘဲ ခုမှအဖိုးတန်မှန်း သိတဲ့အချစ်ကို ကိုယ်တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ပွေ့ဖက်ထားချင်ခဲ့မိတယ်။ ဒါပေမယ့် သဲတွေက ကိုယ်လက်ညှိုးကြားထဲကနေ စီးကျသွားကုန်တယ်။ အချစ်က သဲမှုန်အဖြစ် ကိုယ့်အနား လွတ်ကျပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြန်တယ်။
ဆေးလိပ်က မီးခြစ်ကို ချစ်မိသလိုမျိုး
သကြားက ရေကို ချစ်မိသလိုမျိုး
နာကျင်ခြင်းက ပျော်ရွှင်ခြင်းကို ချစ်မိသလိုမျိုး
ငါ့အချစ်တွေ လောင်ကျွမ်း၊ အရည်ပျော်၊ စွန့်ပစ်ခံလို့….
နာကျင်ခြင်းတွေ နှလုံးအိမ်ထဲ ထာဝရခိုအောင်းမနေဖို့
“ချစ်တယ်” ဆိုတဲ့စကားကို လွယ်လင့်တကူ မပြောပါနဲ့။
“ဥပေက္ခာ” လို့ ငါတင်စားခဲ့ပါရစေ….
ပန်းကလေးသိတဲ့ မမနိုင်နိုင်စနေရဲ့ ကဗျာလေးပါ။ ဒီကဗျာလေးကြိုက်လို့ ................................
မရင့်မှည့်မီ ကြွေသွားတဲ့ အသီးလို
ငါဟာ မြေပြင်ပေါ် ခြွေချခံရသူပါ
အတိတ်တွေ ဆူနာမီ လွှမ်းခဲ့ရတယ်။
ငါနှစ်သက်ရာ ငါကိုးကွယ်ခွင့် မရှိဘူးလား
တိမ်တွေလို လေနှင်ရာ မရွေ့လျှားခိုင်းပါနဲ့
မင်းကို အရမ်းချစ်တယ်လို့ မကြာခဏပြောပါ
ငါ့ကိုရက်ရက်စက်စက် ထားသွားခဲ့ပါ ချစ်သူ
** ဖူးစာရေး နတ်မင်းကြီးရယ်
** ခဏတာ တွေ့ကြုံရပြီး
တစ်သက်တာ မမေ့နိုင်တဲ့ ချစ်ခြင်းတွေနဲ့
** မျက်လုံးစာ မတတ်တဲ့
** အတိတ်ကို မေ့ချင်ပေမယ့်
သတိရခြင်း နောင်တ တွေနဲ့
ကြိုးက တော်တော်နဲ့ ပြတ်ရခက်
မင်းကို ..... မပြောတော့ဘူးနော်။